08:32:36 pm 23-May-2022
राम्रो स्वास्थ्यका लागि कुन तेल बढी लाभदायक छ ?
पछिल्ला केही वर्षयता हाम्रो खाने बानीमा तीव्र परिवर्तन आएको छ, यो सँगै मानिसमा स्वस्थ खानपान प्रति चेतना पनि बढेको छ । मानिसहरूले खानामा पनि स्वस्थ खानाको विकल्प अपनाउन थालेका छन् । नेपाली तथा भारतीयहरुको हकमा तेल र घिउ बढी प्रयोग गर्ने चलन छ । नेपाली रहनसहन तथा भौगोलिक स्थिती अनुसारले परम्परागत घ्यू बाहेक भटमास, सूर्यमुखी, तोरी, जैतुन आदिको तेल खाना पकाउन प्रयोग गरिन्छ। संसारभरि खाना पकाउने तरिका फरक फरक छ। कसैले खानामा बटर प्रयोग गर्छन् भने कोही जैतुनको तेल प्रयोग गर्छन्। लामो समयदेखि यो बहसको विषय हो कि कुन तेल स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो रु यसबारे सबैको आ–आफ्नै धारणा र सल्लाह पनि छ । यही कारणले गर्दा नेपालमा आफ्नो हैसियत र रुची अनुसारले रायस ब्रान तेल, जैतुनको तेल, क्यानोलाको तेल, तिलको तेल, आलसको तेल,तोरीको तेल सूर्यमुखी तेल, भटमासको तेल आदि खाना पकाउन प्रयोग भइरहेको छ। आखिर किन तेलको बारेमा यति धेरै चिन्ता छ ? के तेलले हाम्रो स्वास्थ्यमा यस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
तेल र स्वास्थ्य
घ्यूजस्तै पोषणका लागि सन्तुलित मात्रामा तेलको प्रयोग पनि आवश्यक रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् । यदि तपाइँ दैनिक थोरै मात्रामा तेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, जुन तेल पनि तपाइँको लागि लाभदायक हुन सक्छ। खानामा तेलको प्रयोग बढ्दै जाँदा समस्या हुन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रत्येक खाना पकाउने तेलमा धुम्रपान बिन्दु हुन्छ । बढी तापक्रममा तेल स्थिर रहन सक्दैन। धुम्रपान बिन्दुमा आउँदा, कुनै पनि तेलले अक्सिडाइज गर्न थाल्छ, फ्री रेडिकलहरू जारी गर्दछ। यी फ्री रेडिकलहरू शरीरका लागि हानिकारक मानिन्छन्। विज्ञहरुका अनुसार धुम्रपान बिन्दुपछि तेलको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि घातक हुनसक्छ । यति मात्र होइन, धुम्रपान बिन्दुमा पुगेपछि तेलबाट एक्रोलिन नामक पदार्थ पनि निस्कन्छ जसले फोक्सोमा गम्भीर क्षति पुर्याउँछ। यही कारण एकपटक प्रयोग भएको तेल फेरि प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
सही तेल चयन गर्नुहोस्
स्वास्थ्यको हिसाबले केही कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर, तपाईं आफ्नो लागि सही तेल छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै:
– हामी सबै परिष्कृत (रिफाइन ) तेलहरू प्रयोग गर्छौं, तर यहाँ याद गर्नुहोस् कि तिनीहरूका अधिकांश पोषक तत्वहरू तिनीहरूको प्रशोधनको क्रममा नष्ट भएका छन्।
– अपरिष्कृत (अनरिफाइन) तेलहरू पोषक तत्वहरूमा उच्च हुन सक्छ तर कम धुम्रपान बिन्दु हुन सक्छ। त्यसैले तिनीहरू सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ।
-तपाईले किन्नु भएको तेल बीउ र बिरुवाबाट निकालिएको हो वा रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेर निकालिएको हो त्यो पनि जाँच गर्नुहोस्।
कुन तेल तपाईको लागि फाइदाजनक छ ?
– जैतुनको तेलमा भिटामिन-ई भरिपूर्ण हुन्छ र यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण हुन्छ। मोनोस्याचुरेटेड फ्याटको उच्च मात्राको कारण, यसमा एन्टी-क्यान्सर र एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणहरू पनि छन्। यसले खराब कोलेस्ट्रोल घटाएर मुटुको स्वास्थ्य सुधार गर्न पनि मद्दत गर्छ।
– आलसको तेल धेरै गुणहरूले भरिएको हुन्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यो हो कि यो ओमेगा-3 फ्याटी एसिडमा समृद्ध छ, जुन सामान्यतया शाकाहारी आहारबाट धेरै थोरै मात्रामा पाइन्छ। यसको अतिरिक्त, यसमा विशेष गरी ओमेगा-6 फ्याटी एसिड हुन्छ, जुन मुटुको स्वास्थ्यको लागि धेरै लाभदायक हुन्छ।
– राइस ब्रान तेल पनि आजकल स्वास्थ्य सचेत मानिसहरूद्धारा अपनाइने विकल्प हो । यसमा पोली र मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याट प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । तसर्थ, कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियन्त्रण गर्नुका साथै यसले मुटुसम्बन्धी रोगहरूबाट पनि बचाउँछ र टाइप-२ मधुमेहको जोखिम पनि कम गर्छ।
– तिलको तेलमा एन्टिअक्सिडेन्ट पनि प्रशस्त हुन्छ । यसले विशेष गरी पार्किन्सन रोग जस्ता न्यूरोलोजिकल समस्याहरूबाट जोगाउन भूमिका खेल्छ। यसलाई ब्लड सुगरको व्यवस्थापनमा पनि फाइदाजनक मानिन्छ ।
-सूर्यमुखी तेल वर्षौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ। यसमा स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा कम हुने भएकाले यो धेरै किसिमले फाइदाजनक हुन्छ । यसले ब्लड सुगर, कोलेस्ट्रोल र मोटोपना जस्ता अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ।
यी बाहेक एभोकाडो आयल, सोयाबिन आयल आदि पनि धेरै गुणले भरिपूर्ण हुने भएकाले स्वास्थ्यको हिसाबले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।